Inothe ngobuchwepheshe iGolf 8 GTI
Fanelesibonge Bengu | December 7, 2021
IMOTO: VOLKSWAGEN GOLF 8 GTI
NGESIKHATHI iVolkswagen iqala ukudayisa iGolf 8 Ningizimu Afrika ngoSepthemba ayichithanga sikhatha yaqala ngentandokazi iGolf 8 GTI.
Namanje ayikhulunywa indaba yeGolf 8 ejwayelekile njengoba ohlwini lwezimoto eziza ngonyaka ozayo kukhona iGolf 8 R maphakathi nonyaka.
Angisale sengikutshela ukuthi ezinye ongazilindela yiPolo nePolo GTI ethuthukisiwe, iCaddy, Tiguan R, Tiguan Allspace ethuthukisiwe, Taigo, T-Roc ethuthukisiwe nePolo Sedan.
Imininingwane ngeveni i-Amarok eyakhiwe ngokubambisana neFord bathi izoqinisekiswa ngonyaka ozayo.
Kodwa-ke uma sibuyela kwiGTI, iNingizimu Afrika ibalwa namazwe ahamba phambili ngokuyithenga emhlabeni jikelele. Ezinyangeni ezimbili iGolf 8 GTI iqale ukudayisa kuthengwe angaphezulu kuka-200.
IGolf 8 GTI ithe yethulwa kwaqubuka imibono ehlukene ngayo nokuyinto ebilindelekile kwazise esigabeni sezimoto encintisana nazo iyathandwa. Nangesikhathi ngihamba ngayo amakhanda abephenduka nayo abanye beyiteketisa ngezindlela ezahlukene ubezwe bethu “Number 8” noma ngendlela edume ngayo iVrrr Pha.
Umsindo kaVrrr Pha ukhona ezinqaweni ezimbili ngemuva noma ungemkhulu kangako.
Injini yileyo ehamba iGolf 7 GTI kodwa yenyuswe amandla ngo-11kW. Ingu-2.0 TSI turbocharged ekhafula amandla angu-180kW netorque engu-370Nm. Isebenzisa ugearbox oyi-7 speed DSG bese kuba nama pedal shifters ngemuva kwesiteringi.
Ukusuka ku-0 iye ku-100km/h kuyithatha imizuzwana engu-6.4 bese kuthi ijubane elikhulu libe ngu-250km/h.
IGTI lapho ethola khona amaphuzu yindlela ehamba ngayo emgwaqeni. Ingaba yimoto oyishayela nsukuzonke ukuya emsebenzini nokuvakashela abangani nokuthi uma ufuna ijubane usheshe ulithole ngokuqinisa kancane emafutheni. Uma usuyinjathela iyanamathela emgwaqeni noma ushaya amajika ngesivinini ingasokoli. Ugearbox nenjini kusebenza kahle nokwenza amandla iwathumele ngendlela emasondweni angaphambili.
Ayizweli kakhulu emabhampini futhi ithule ngaphakathi.
Ngesikhathi ngihamba ngayo ibinobuhixihixi bokuvele ime ingafuni ukunyakaza. Omunye umsebenzi wasegaraji lakwaVW uveze ukuthi inenkinga ye fuel pump engayithumeli ngendlela uphethroli enjini nokuyinto abezokuxhumana kwaVW South Africa abathe abanalo ulwazi ngayo.
Ithangi layo likaphethroli lingu-50 litres futhi ngo-100km bathi iphuza amalitha ayisikhombisa.
Ukuhamba kamnandi kwayo emgwaqeni kwengezwe nangokufakwa kwezokuphepha ezenza impilo yomshayeli ibe lula.
Lapha ngibala i-adaptive cruise control eyenza ukuthi ihambe ngesivinini osikhethile iphinde inciphise uma kukhona imoto ephambi kwakho. Injalo iyakusiza ukuhlala emzileni. Iyasho uma kunezimoto eziceleni iphinde izibhrekele uma ingase ishayise ngaphambili.
Ebusuku amaLED Matrix headlights akhanya bha futhi ayazidima ukuze engaxhiphi abanye.
Uma upaka bayigaxe ikhamera futhi iyakwazi nokuzipaka i parallel parking.
Ukuba ngaphakathi kuyo yinto ekahle ngoba isikhala sikhona nasebhuthini. Izihlalo ziyisikhumba bese kuthi okhakhayini bayigaxa isunroof oyengezela imali uma uyifuna njengezinye zezinto ezikule ebesihamba ngayo.
Izihlalo zangaphambili ziyafudumala. Amabhathini yinto engandile kunalokho izinto eziningi uzisetha kwitouchscreen ephakathi nendawo. Engathi ungazinika isikhathi ukuze uqonde kahle ukuthi izinto zisebenza kanjani. I-aircon uyisetha la, ubona khona ingemuva uma uhlehla, iselula uma uyixhume nge-Apple CarPlay noma i-Android Auto nayo ivela la. Umsindo uphuma ezipikheni zeHarman Kardon ebengingathanda kube lula njengakwiTiguan ukuwusetha.
Amabhathini esiteringini ngathi ayangqangqazela uma uwathinta. Yiwo owasebenzisela ukusetha okubona nakwidigital instrument cluster.
Ngaphandle bayifake iBlack Styling Package eyenza umugqa obomvu ngaphambili ube mnyama, amarimu angu-18 inch nawo mnyama kanjalo namakhava ezibuko.
Ifika neservice plan yeminyaka emihlanu noma u-90 000km newarranty yeminyaka emithathu.